PollSnack: Abuur Codbixin Fudud, oo Habeyn ah Facebook | Martech Zone
Axad, Janaayo 25, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
PollSnack waa qalab sahlan oo khadka tooska ah looga helo doorashooyinka iyo sahaminta, taas oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto oo aad sameyso su'aalo-waydiimaha suuqa iyadoon lagaa baran barashada softiweerka adag. Warbixinta ka soo baxda baaritaanka waa mid aad u fudud oo toos ah, iyadoo natiijooyinka lagu soo bandhigayo waqtiga-dhabta ah.
Sida Loogu Dhejiyo Codbixinta Fudud ee Facebook
Waa kuwan fiidiyow gaaban oo ku saabsan sida aad uga faa'iideysan karto PollSnack si aad ugu dhajiso ra'yi-ururin ama sahamin si fudud Facebook dhexdeeda. Codbixinta ka dhalatay ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa baloog, ama lagu wadaagi karaa Twitter ama emayl.
Iyada oo PollSnack waxaad ku sameyn kartaa:
Habee muuqaalka ra'yi-dhiibashadaada iyo aaladda qalabka wax lagu qoro.
Abuur cod bixin iyo sahan luuqad kastoo aad rabto.
Codbixinta ku dhaji websaydhkaaga.
Ku keydi xogtaada si aamin ah inta aad nooshahay koontadaada.
Isticmaal xiriiriyeheena xiriirka isla markaana hel 30% LAGA TAGO diiwaangelinta 1 sano ee PollSnack Pro qorshe.
Tags: sahan blogcodbixinta facebooksahan facebookdoorashadadoorashadasahan twitter